moi: အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲကြေညာခြင်း
၂။ သို့ရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ၂၃ . ၁၁ . ၂၀၁၅ ရက်စွဲပါကြေညာချက် အမှတ် (၁၆၄/၂၀၁၅) ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅) တွင် ဆန္ဒမဲ အများဆုံးဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူမှာ ဦးညီစိန်၊ တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲ၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉(ခ)နှင့်အညီ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ ရှမ်းပြည်နယ်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅) တွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်မှာ ဦးညီစိန် [ ၁၃/ နခန(နိုင်) ၀၁၈၇၄၇] တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ ဖြစ် ကြောင်း ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ ကြေညာလိုက်သည်။